Momba anay - Shenzhen MENOBeauty Technology Co., Ltd.
Shenzhen MenoBeauty Technology Co., Ltd, dia naorina tamin'ny 1997, no orinasa siantifika sy teknolojia an-trano voalohany indrindra mifantoka amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fitaovana iraisam-pirenena momba ny Aesthetic & Medical.
Miaraka amin'ny traikefa momba ny fampandrosoana nandritra ny 20 taona, ny orinasan-tsika dia mendrika amin'ny ISO13485 ary ankehitriny manana teknolojia patanty 50 mahery iraisam-pirenena sy fitaovana famokarana mandroso, omena voninahitra ny fitaovana rehetra handresena CE, ROHS sns.
Izahay dia miasa ho an'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fampitaovana haitao am-polony am-polony raha mbola eo am-pitomboana ny tsena sinoa, manodina ny fizarana tsena avo sy mpanjifa samihafa an'ny OEM, ODM ary marika hafa erak'izao tontolo izao.
MENO miaraka amin'ireo tarika teknika fanaingoana kosmetika an-toerana sy iraisam-pirenena toy ny China Hairdressing Beauty Association, Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen, JMB, BASF, sns.
Meno dia nikaroka sy namokatra andalana 11 HIFU ary teknolojia misy pataloha hifu amin'ny fivaviana tamin'ny taona 2014 ary hatreto dia nanolotra serivisy OEM & ODM be dia be ho an'ny orinasa anatiny sy ampitan-dranomasina maro.
MENO dia mifantoka amin'ny fikarohana ary mamokatra teknolojia avo lenta manohitra ny fahanterana, fitaovana manatsara ny vatana Aesthetic & Medical ao anatin'izany ny andiany HIFU, andian-tsarimihetsika Radio, andiany Vacuum Cavitaion.
MENO, aza manaraka mihitsy fa mandrosoa foana!
Manantena fatratra ny miaraka aminao i MENO ary hanao ho avy mamiratra!